Ny ankamaroan'ny ankizivavy sy vehivavy dia Amerikana mpilalao sarimihetsika sy modely Blake Lively. Izy no tompon'ny endrika miavaka. Tonga tany aminy i Fame tamin'ny famoahana ilay andian-dahatsoratra "Gossip Girl", izay nilalao tamin'ny endriky ny blond lava volo. Blake Lively ao anaty akanjo, na dia taorian'ny nahaterahan'ny zaza iray aza, dia mahagaga. Ary izao rehetra izao dia misaotra amin'ny fiasana tsy tapaka amin'ny tenanao.
Blake Live ao anaty kiraro - ireo tsiambaratonam-piraisankina taorian'ny fahaterahana voalohany
Raha vao nalaza ilay mpilalao sarimihetsika, dia mbola 57 kilao monja izy, ary nahatratra 178 cm izy. Vetivety dia lasa mpilalao maro izy. Anisan'izy ireo ny trano fonenan'ny Christian Labuten sy Karl Lagerfeld .
Ny 28 taona mpilalao sarimihetsika dia tia manao akanjo tsara tarehy. Ary ny fivoahana tsirairay dia sary vaovao. Raha vantany vao tapaky ny firaketana ny vehivavy lamaody - nandritra ny andro dia nanova ny ekipa 10 izy.
Afaka mahita Blake Lively eny amoron-dranomasina matetika ianao. Ary isaky ny mandeha dia bengy vaovao, izay manasongadina ny hatsarany, ny firindrany ary ny firaisana ara-nofo.
Tamin'ny faran'ny taona 2014, lasa reny ilay mpilalao sarimihetsika. Nefa ny nahagaga ny mpankafy azy rehefa nahita an'i Blake Lively tao anaty akanjo dia tsy ela taorian'ny niterahana. Mahagaga izy.
Inona no zava-miafina amin'ny firindran'ny mpilalao sarimihetsika Hollywood?
Ny voaly miafina dia nosokafan'ny mpanofana azy manokana Don Saladino. Tao amin'ny asan'izy ireo dia nanaraka ny fitsipika toy izany izy ireo:
Ny tanjon'ny fampiofanana tsirairay dia ny hamerenana ny angovo. Blake Lively dia tsy nanala ny vatany tamin'ny fampiasana mahery vaika.
Ny fampiofanana dia natao in-6 isan-kerinandro. Isan'andro dia trano vaovao ho an'ny faritra samihafa. Afaka mamerina ilay endrika tonga lafatra izany. Efa nibanjina akanjo volom-borona mavomavo i Blake Live, nanintona ny sain'ny paparazzi.
Natao ny toeram-pisakafoanana iray. Mihinàna ny mpilalao sarimihetsika in-5 isan'andro, tsy mandingana sakafo maraina.
Summer 2016 - famoahana ny sarimihetsika "Otmel" sy ny bevohoka Blake Lively ao anaty akanjo
Tahaka ny hoe vao niteraka ilay mpilalao sarimihetsika, saingy herinandro vitsy taty aoriana dia efa tafiditra tao amin'ny fitifirana ilay sarimihetsika "Otmel" izy. Ao anatin'izany dia tsy maintsy nasehony ny vatana tsara indrindra amin'ny mpandidy, ary nahomby izy 100%. Tao anatin'ity horonantsary ity no nisehoan'i Blake Lively tao anaty milina fanaovana spaoro. Ny tarehiny, na teo anatrehan'ny bevohoka aza, dia nijery lavorary, niposaka tsara ary nitsirara.
Hugh Jackman teny amin'ny rivotra dia nanakiana ny namany Ryan Reynolds
Ny Glamorous Blake Lively sy chique Ryan Reynolds dia niseho tao amin'ny premiere "Deadpool 2"
Tsy dia be loatra ny fotoam-pialan-tsasatra nandritra ny andron'ny fahaleovantenan'i Etazonia, ny paparazzi dia naka sary indray ilay vehivavy bevohoka Blake Lively indray miverina amin'ny kiraro. Izy sy ny vadiny Ryan Reynolds sy ny namany dia nahafinaritra, ary faly ilay mpilalao sarimihetsika.
Chloe Moretz amin'ny akanjomailaka
Jennifer Lopez's Hairstyles
Kintana tsy misy menaka
Garderobe fototra avy amin'i Evelina Khromchenko - toro-hevitra matihanina amin'ny lamaody
Bagels miaraka amin'ny menaka - fomba mahavelona indrindra amin'ny famokarana haingana
Dexamethasone - injections mandritra ny fitondrana vohoka
Toeram-pisakafoanana Classic - tsiambaratelon'ny famokarana sy ny fahamendrehana mahomby
Taom-baovao sy fomban-drazana vaovao
Ny tosidra avo lenta - ny antony sy ny fitsaboana
Ahoana no hanamboarana kapa amin'ny zaza?
Lila tatoazy - ny dikany
Anthurium - fikarakarana tokantrano
Kaleidoscope amin'ny tanana manokana
Jennifer Lopez dia nanatrika mozika iray tao Broadway niaraka tamin'ny ankizy sy Kasper Smart
Tavoahangy katsaka miaraka amin'ny vary sy ny ronono
Ny akanjo fitafy - ny modely lamaody indrindra amin'ny silhouette sy ny akanjo tokony hatao?